Guangzhou, Shina ny Toerana Iray ny Ankizivavy Iray Mans Travel
Guangzhou, Shina dia tanàna lehibe any Shina fa tena feno ireo vehivavy rehetra maniry ny vahiny mpiara-miasa. Ity lahatsoratra ity dia antenaina fa hahazo anao nanomboka izay mba hihaona sy ny daty tokana vehivavy ao Guangzhou. Ny olana lehibe indrindra ao Guangzhou, ary ny sisa Shina dia ny hantsana fiteny. Tsy maro ny zazavavy latsaky ny handeha ho afaka hiteny anglisy tsara toy ny tianao fa ny sasany amin’izy ireo dia miezaka ny tena tsara indrindra, Fivoriana ankizivavy ao amin’ny nightlife faritra dia ho be dia be kokoa. Izy ireo dia azo inoana fa ho mamo izay mandrakariva dia manampy antsika hiala, miampy, raha izy ireo tany am-ponja, ary nisotro izany ao amin’ny discos sy ny fikambanana tsy foana ny maha-be momba ny mifanerasera fa ny fanaovana firaisana amin’ny sipany, ho avy ny vadiny na ny avy any ivelany mpiara-miasa fa alina iray na roa. Izany dia mety ho iray amin’ireo sarotra indrindra ny fomba, fa raha toa ka nataony tao ny ezaka tsy mety miasa ho anao tsara fotsiny. Raha midona ho tsara tarehy Guangzhou vehivavy ao amin’ny toeram-pivarotana lehibe na avy sy momba ny ianao dia afaka tsiky sy handeha ary miezaka sy miresaka amin’izy ireo, ny ratsy indrindra mety hitranga dia tsy miraharaha ianao, na dia mety ho tsy mahazo aina miezaka miteny malagasy miaraka aminao. Taikoo dia tena upscale-pivarotana izay mety ho afaka hihaona sasany ‘ny’ tovovavy ao amin’io toerana io. Misy be dia be ny hafa tsara toerana na dia tahaka ny any Beijing Lalana, Guangzhou ara-Barotra mpandeha an-tongotra eny an-Dalana, Voalavo eny an-Dalambe, ary ny toeram-pivarotana iray eo ambanin’ny CTF ny fitantanam-Bola Tilikambo. Rehefa ny vehivavy any Guangzhou dia avy any amin’ny trano fisotroana na fikambanana misotro, dia ho tsy dia mpifikitra amin’ny nentin-drazana sy ny sitrapony dia hisokatra ny zava-misy te-hampihatra ny teny anglisy sy ianao dia praiminisitra kandidà ity. Maro Guangzhou ny ankizivavy no liana amin’ny mahery ny vahiny, fa ny ankamaroany dia tena saro-kenatra mba hiezaka sy amin’ny chat miaraka aminao eny imasom-bahoaka. Trano fisotroana sy ny nandihy amin’ny lafiny hafa, izy ireo dia ho tsara ny hanana ny firesahana amin’ny sy hizaha toetra ny rano. Ny fomba tsara indrindra hahitana vehivavy iray ao Guangzhou dia miandry azy ireo hanatona anareo ao amin’ny bar, na fikambanana, ary mandehana avy any. Raha toa ka manatona anao, izy ireo dia, na mamo ampy izy ireo namoy ny sasany ny menatra mihitsy na dia tsy tena toy ny mijery anao ary te-hahalala bebe kokoa. Ny sasany mangatsiatsiaka-ponja mba jereo ireo Parry Irlandey Pub-ny, Fahadiovana ela, Ny Volamena, sy ny Hooley. Tsarovy koa fa raha toa ka boky amin’ny efitrano iray Airbnb ny Guangzhou ny vehivavy dia mahazo aina kokoa handeha hiverina any an-toerana noho ny raha toa ka hanasa azy ny mampaninona cheap trano fandraisam-bahiny. Guangzhou ny ankizivavy dia mety ho fianarana ny teny anglisy ao an-taorian’ny ora fianarana na ny oniversite, fa tena tsy tena mahazo aina miteny azy noho ny menatra. Raha toa izy ireo mikasika ny mampiaraka toerana, dia mety ho afaka hamaky sy hanoratra azy io sy ny mavitrika mitady ho an’ny vahiny mba hahazatra ny amin’ny. Shina Fitiavana Rohy dia afaka misoratra anarana ary ho ara-bakiteny efa an’arivony ny hafatra tena vonona sexy Guangzhou ny vehivavy te hihaona aminao hatrany ny daty. Ho any Guangzhou dia tena tsy fahita firy hafakely ny karazam-biby izay misy ny s ny lalana tsy nandeha, ary tsy maro ny vahiny no mandeha eto mitady vehivavy. Ny hany olana dia ny tsy fisian’ny fifandraisana fiteny ao an-toerana dia tena ho afa-tsy zavatra miara-miasa hanohitra anao. Izany hoe, raha mbola mahita tovovavy tsara tarehy akaikin’ny afaka foana fomba ny sy ny hanandrana. Raha toa ka tsy tonga dia liana, vao niverina tsikelikely eny, fa raha izy dia zavatra tena miasa avy amin’ny kely indrindra amin’ny fotoana fohy. Ny alina iray miavaka lehibe fa fanambadiana iray ireo zazavavy ireo dia mety ho iray amin’ireo safidy tsara kokoa satria izy ireo no tena matoky sy mafy miaro ny anao, satria ny fomba fiasan’izy misy fa saika ny zazavavy rehetra izay te vahiny dia ho nikasa hangalatra ianao isaky ny tokan-tena fotoana izao, izy dia tsy manodidina anao. Raha toa ka ianareo koa ry namana, tokony tany am-boalohany ny fimailo avy amin’ny ETAZONIA amin’ny araka ny tokony ho izy ny habeny sy ny mendrika.
izy ireo dia hivarotra ny tena marika sy miteny malagasy.
sambo na aiza na aiza ao Shina
Misy vehivavy tanora hahatsapa toy ny lehilahy iray ny lehilahy manodidina Guangzhou nandritra ny roa andro amin’ny herinandro voalohany amin’ny volana desambra. get nifandray toy ny tsy ho diso fanantenana toy ny dolara amin’ny fotoana. Te-hihaona amin’ny Shinoa tovovavy iray ao Guangzhou raha liana ianao mba hihaona amiko mba Miangavy re antsoy aho. Aho drafitra mba hitsidika Guangzhou herinandro manaraka desambra ny Jan. Eto aho ho fialan-tsasatra, fa te-hihaona malina vehivavy mandany ny fotoana sy hanampy ahy loharanom-hevitra raharaha.
Mila ny sasany manao raharaham-barotra ny fifandraisana
HI izaho no i Mohammad, izaho no liana mba hihaona ny ankizivavy iray ao Guangzhou, satria irery aho eto ny fotoana rehetra ary mahazo aho leo. WeChat: hamada, misaotra anao hi, aho, dia ho any Guangzhou nandritra ny herinandro manomboka ny volana aprily ary te-hanana ny ankizivavy iray mba hiaraka amiko ho andro sy hatory miaraka amiko any amin’ny bara, sns. M mainty Amerikana mandeha ny raharaham-barotra ao Singapore, avy any Guangzhou tamin’ny volana jona, dia mila mamy vehivavy tanora iray ho an’ny orinasa, ary mitety vohitra manodidina an’i Shina. Izy dia tokony hahafantatra ny sasany malagasy farafaharatsiny
Online Chat Room Maimaim-Poana Amin'ny Aterineto Ankizivavy Chat Room Tsy Misy Fisoratana Anarana →